Syncing Music inay Android ka PC / Android
> Resource > Android > Sida loo hagaagsan Music inay Android ka PC
Ma rabtaa in ay u guuraan music inay phone Android ama kiniin laakiin heli tahay si aan la soo ciyaaray kartaa telefoonka Android ama kiniin ah? Cable USB Your waa la jebiyey, oo hadda aad uma music ka computer bedeli karaa telefoonka Android ama kiniin ah?
Waa hagaag, in ay u hagaagsan music si ay Android, si adag Waxaan ku talinaynaa in aad isku daydo Tababaraha this Android - Wondershare MobileGo for Android (Windows) iyo Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Tababaraha Android gelineya inaad nuqul oo badalo music iyo videos kombiyuutar si ay telefoonka aad Android si fudud. Ka sokow, waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso xiriirada iyo sawiro iyo aad u rakibi barnaamijyadooda.
Ka Computer si ay Device Android Bedelka Music
Download version ku raad free of MobileGo for Android. Markaas, hubi tallaabooyinka hoose. Halkan, waxaan isku dayi doonaa inaan version Windows - Wondershare MobileGo for Android. The version Mac dhow ka shaqeeya la mid ah sida version Windows ah.
Tallaabada 1. Isku telefoonka Android / kiniin in kombiyuutarka
Connect telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka la cable USB ama Wi-Fi. MobileGo for Android Si toos ah waxaa lagu ogaan doonaa sida ugu dhakhsaha badan uu ku xiran. Markaas, aad telefoon Android ama kiniin ah ka dhex muuqan doonaa suuqa kala aasaasiga ah sida shaashadda hoose wuxuu muujinayaa:
Fiiro gaar ah: Marka version Windows aad telefoonka Android ama kiniin ku xidhi kartaa si aad computer ku via Wi-Fi. Ka sokow, si ay u isticmaalaan la xidhiidha Wi-Fi, waa in aad la soo baxdo iyo rakibi MobileGo. apk soo gudbin ah ee aad taleefan Android ama kiniin hore.
Tallaabada 2. Transfer music si ay Android phone / kiniin
Guji "Music" khaanadda tagay ka dibna uu furmo suuqa music ah, ku dhuftay saddexagalka "Add" ku darto files music fayl in telefoonka aad Android ka yar. Haddii aad ku rakibtay Lugood on your computer, aad xitaa ku dari kartaa playlists Lugood in aad telefoon ama kiniin. Marka qaabka file music waa in aynan, MobileGo u badalo doonaa mid ka mid ah socon.
Hadda, si wanaagsan la sameeyey! Waxaad u suurtagashay in ay u guuraan music ka PC in telefoonka aad Android. Waxa intaa dheer in wareejinta music in Android, MobileGo for Android sidoo kale awood u aad u dhoofiso music, videos, xiriirada, SMS, Chine in ay kombiyuutarka, maareeyaan kaadhka xusuusta telefoonka iyo kaarka SD iyo kuwa kale.